कोरोनाले हामीलाई के सिकायो ? - Sutra News
कोरोनाले हामीलाई के सिकायो ?
जीवनको रूप पहिलो पटक कोरोना अवधिमा परिवर्तन भयो बजारको बन्दसँग । घरमा उपलब्ध सीमित स्रोतहरु बीच बाँच्ने कला सिकायो । वर्ष दिनपछि व्यापार व्यवसाय हलुका रूपमा खुले । त्यो बाहेक एक वर्ष बित्यो जुन परिवारका सदस्यहरूसँग धेरै यादगार दिनहरू बितिरहेकाे छ ।
त्यसपछि दोस्रो छाल आयो र अवस्था झन झन जटिल हुँदै गयो । यस समयमा भोक र तिर्खाएका मजदुरहरू, उनीहरूका परिवारहरू रातदिन घर फर्केका समाचारहरू, कोरोनाबाट निधन भएकाहरूको तस्बिर, उपचारको अभावले मृत्युवरण गर्ने बिरामीहरूको पीडाले पनि धेरै विचलित गरायाे ।
उही समयमा, त्यहाँ पनि बहादुरी व्यक्तिहरूले परिस्थितिको सामना गरिरहेका र खाँचोमा परेकाहरूलाई सम्भव तरिकाले सहयोग गर्नेहरू थिए, जसले उनीहरूलाई प्रेरणा दियो ।
कोरोनाका लक्षणहरूले घेरेको र तिनीहरूबाट निको हुन परिवारका सबै सदस्यहरूले बुझे कि सम्भवतः कोरोनाले हामीलाई अहिलेसम्म सुरक्षित राख्न सन्देश दिँदैछ, भविष्यमा विगतका गल्तीहरू दोहोर्याउँदैन र प्रकृतिसँग खेल्दैन । कोरोना अवधिले वातावरणीय संरक्षणको लागि उठाएको चेतना साँच्चै ऐतिहासिक छ । एकै साथ व्यायाम र योगतर्फको हाम्रो प्रवृत्ति पनि रोगहरू रोक्नको लागि बढेको छ ।
बितेको डेढ वर्ष कोरोनाको डरलाग्दो छायाँले हामीलाई जीवनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न सिकायो । परिवारका केही सदस्यहरूले खोप लगाए । कतिपयले लगाउँदै छन् । धेरै उत्साहका साथ जीवनको दोस्रो पारी बाँच्ने संकल्प लिएका छन् ।
राम्रो स्वास्थ्यको लागि समयमा सरल पौष्टिक खाना, एक संयमित र अनुशासित दिनचर्या अनुसरण गरेर स्वेच्छाले नियमित व्यायाम र योग गर्न काेराेनाले सिकायो ।
सामूहिक प्रयासका कारण अब घरमा तनावको वातावरण न्युन छ । आपसी हाँसोले भरिएको व्यवहारको वृद्धिका कारण मानसिक तनावलाई प्रतिस्थापित गरेको छ । अनुवाद
प्रकाशित :श्रावण ७, २०७८ बिहिवार - ०८:०६:३९